Rudzi: Mitambo uye Fitness
Kukura kwemazariro kunoita basa rakakosha kwazvo panguva yekudzidzira nerudzi rwezvishandiso. Kune mazita akati wandei ayo anowanzo sanganiswa nawo. Asi kazhinji projekti inonzi "mabara akafanana" kana ...
Ngarava mota "Mercury": hunhu uye ongororo. Mercury yekunze mota mota
Iyo yekuJapan kambani "Mercury" inonyanya kugadzira yekunze mota dzemhando dzakasiyana. Pakati pezvigadzirwa zvekambani ino mushandisi anokwanisa kuwana ese maviri-sitiroko uye mana-sitiroko kugadziridzwa. Kana iwe uchitenda wongororo dzevaridzi, saka murimi ...
Iyo yekutamba yemitambo yekunze inobatsira kuchengetedza nekusimudzira hutano hwenyika. Mazuva ano, nhandare yemitambo inzvimbo iyo vana nevakuru vanoshandisa dzakasiyana siyana ...
Kubata hove muBelgorod - nzvimbo dzakanakisa
Iyo yekuunganidza inounganidzwa, makonye ari muchitoro, mamiriro ari kurwa, uye mamiriro ekunze ari kuzevezera. Unogona kurova mugwagwa. Inosara chete kusarudza kwekuenda kunoraura muBelgorod nenzvimbo dzakapoteredza guta rino rakanaka ...
PSO -1. PSO sniper chiyero - 1. Sniper optics
Iko kuona kwemaziso chikamu chakakosha che sniper. Ichi chishandiso chakakosha pakuita nyore, nekukurumidza uye kwakaringana kupfura. Iye chete ndiye anokutendera kuti usvike kune chakanangwa kunzvimbo dziri kure kwazvo. Nekuda kwekuvapo kwekuvhura uye mukana wekuwedzera ...
Iyo yekuchinjisa maviri-nhanho sitiroko (mifananidzo inoratidza iyo ichaunzwa pazasi) inoonekwa senzira huru yekusvetuka munzvimbo dzakasiyana siyana uye nekutsvedza mamiriro. Inonyanya kushanda pane yakapfava (kusvika 2 °) uye ...
Nei CSKA ichinzi "mabhiza", uye vateveri vayo - "mabhiza"?
Vazhinji vateveri venhabvu vanofarira uyu mubvunzo: nei CSKA ichinzi "mabhiza", uye vateveri vayo - "mabhiza"? Uye chaizvo, nei? Iwe uchawana mhinduro yemubvunzo uyu muchinyorwa. Yenhoroondo yekushanya Nei CSKA inonzi ...
Iyo tekinoroji yekugadzira inopfeka-isingadziviri mapanga yaivapo zviuru zvemakore apfuura. Zvinotaridza kuti padanho razvino rehunyanzvi, munhu anogona kukanganwa nezvenzira dzekare dzekugadzira mashizha nekuchinjira kune mamwe mapepanhau epamberi ekugadzira iwo. ...
Iyo White Sea, iri hombe nzvimbo yeArctic Ocean, inotonhora zvakakwana. Zvakadaro, skerries nenzvimbo dzegungwa, pamwe neinoshamisa taiga hunhu, zvinokwezva vazhinji. Vanhu vanouya pano kuvanzika kubva pamheremhere ...
"Chertanovo" chikoro chebhora chevana. Nhabvu chikoro ongororo
"Chertanovo" chikoro chebhora icho mumakore achangopfuura chave chimwe chemasangano anotungamira eMoscow uye neCentral District yese. Nekutsigirwa neHurumende yeMoscow kumashure kwavo, vatungamiriri venzvimbo ino vakakwanisa ku ...
"Bodyflex": wongororo, usati uye mushure memifananidzo. Kufema kurovedza muviri kwekudzikira uremu
Bodyflex inzira yakasarudzika iyo inokutendera iwe kuti utendeke kurasikirwa neayo mamwe mapaundi. Iyi seti yemitambo yekudzikira uremu yakagadzirwa naGreer Childers. Maererano naye, mhedzisiro inozoonekwa mushure memavhiki maviri emakirasi. Zvimwe…
Wese munhu anoziva nezvechinhu chinobatsira chemvura yemuviri. Inomhanyisa metabolism, ichizadza isina chinhu mudumbu, inopa kunzwa kwekuzara kwenguva pfupi. Mvura inoshandiswa nesimba nevatambi mumitambo yese ...
Ungawana sei huremu hwemurume mutete? Kazhinji uyu mubvunzo unobvunzwa nevakawanda vane mamwe macomplex nezvechitarisiko chavo. Chido ichi chingaitwe sei? Verenga nezve zvakakosha nuances ...
Mureza weOlympic - unomiririrei?
Kutanga kweMitambo yeOlympic kwakaitwa kumaodzanyemba kweGreek muguta reOlympia. Iyo yekutanga mutambo mutambo waisanganisira kumhanya nhanho imwe. Kupfuurirazve, chirongwa ichi chakatanga kuwedzerwa nemhando nyowani dzemakwikwi: kumhanya pa ...
Kwete kare, imwe mhando nyowani yekuzivikanwa yakave inozivikanwa, uko kamwene iri furo. Parizvino, kuchine vamwe vatambi veamateur vasina chavanoziva nezvenzira inonakidza yekuredza. It…
Twister mutambo: mitemo
Chii chekuitira kambani ine hushamwari mune zvakasikwa, kana bhengi isati yagadzirira, pakanga pasina zvakakwana maraki kumunhu wese, uye kune simba rinopfuura rakaringana uye chishuwo chekuzviratidza nekuita kuti vamwe vaseke? Yenguva yekuwana ...
Vagari vemaguta makuru vanowedzera kuda kwakadai kugarisana nharaunda uye zvine hutano kutakura sebhasikoro. Nekudaro, iro dambudziko chairo mune ino kesi inogona kunge iri kutsvaga nzvimbo yekuchengetera kuchengetedza simbi ...
Unoziva here kuti Victoria Romanets akarasikirwa sei nehuremu? Unoziva here dhayeti yaaive ari? Kana zvisiri, tinokurudzira kuti iwe uverenge chinyorwa. Isu tinovimba kuti iyo ruzivo irimo ichakubatsira iwe mu ...
Huwandu hwevateveri vechikepe chealpine chiri kukura gore rega rega munyika medu. Nzvimbo nyowani, dzakashongedzerwa nzvimbo dzekuchengetera dzinoonekwa muRussia, kwaunokwira makwara akanaka uye unongova nenguva yakanaka. Na…
Nepo vashoma vanhu vanovimba dhayeti mapiritsi, kudya zvine hutano, zvinopesana, gore rega rega vanowana vatsva shamwari. Chokwadi, kurasikirwa uremu hakufanirwe kuve chinhu chakakosha, zvishoma kugadzirisa yako ...
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,557 masekondi.